ဘောလုံးကို ခေါင်းဖြင့် တိုက်ခြင်း ဦးနှောက်ကို ဒဏ်ရာရစေနိုင် | အိမ့်မှူးသော်
Photo Editor (11)
Converter Softwares (8)
ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များ (8)
Cleaner Softwares (7)
Internet download manager (6)
Recovery Softwares (3)
Free storage site (2)
Skin pack for windows7(2)
Create Andriod App For web (1)
Windows7loader (1)
wifi hack (1)
Message Free ပို့မယ်
cmd command box အရောင်ပြောင်းမယ်
စကားအင်္ဂါရပ် (၁၀) ပါး
Message Free ပိတ်သွားခြင်း
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး မြို့ ကြီးများ
Google ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိနာမည်လေးအစားသွင်းမယ်
အံသြဖွယ် ဖြစ်ရပ် (၁၀) ခု
ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းမှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်သ...
အသက်(၁၆)နှစ် နှင့် Ph.D ဘွဲ့ရသည့် တရုတ်ကျောင်းသာ...
တစ်နှစ် အရွယ် ကလေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်
စေတီ တည်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ် (၄) မျိုး
run box ထဲက lists လေးတွေ ကိုရှင်းမယ်
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း မတိုင်ခင် မြန်မာအင်တာနက် မြန်နှုန်ြး...
ဖွင့်ထားသော Folder တွေ Desktop ပေါ်မှာ ညီညာစွာပေါ်ေ...
kepler.22b (ကမ္ဘာနှင့် တူသောဂြိုလ်)
ဘောလုံးကို ခေါင်းဖြင့် တိုက်ခြင်း ဦးနှောက်ကို ဒဏ်...
မိခင်၏ စိတ်ဖိစီးမှု ဗိုက်ထဲရှိ ကလေးထိခိုက်နိုင်သည...
ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စ်ဖြစ်ရန် အခြေခံ (၁၀) ချက်
Laptop ၊ notebook ၊ netbook ဘယ်လိုခွဲခြားခေါ်သလဲ
Google မှာ နှင်းကျနေတယ်
ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် ကလေးငယ် ဘရားဇီးတွင်မွေးဖွား...
Firefox မှာ ပိုနေသော search box ကိုဖယ်ရှားခြင်း
သြကာသ ရှိခိုးမှ အဓိပ္ပါယ်တစ်ချို့
Popular Firefox Themes
ကွန်ပျူတာ နှေးရသော အကြောင်းအရင်း
Iphone, Ipad, Ipod တွေမှာ မြန်မာလိုပေါ်အောင်လုပ်န...
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၆) ချက်
Display driver stopped responding and has recovere...
အိန္ဒိယမှခြေ ခြောက်ချောင်းနဲ့ ကလေးငယ်
ကွန်ပျူတာ connector အကြောင်း
serial key များရှာရန်
Avast ! -antivirus
windows intall ပြုလုပ်ခြင်း
နည်းပညာ IT Reshare Site မုန်တိုင်း ကိုညီနေမင်း ဒေါနသား မှော်ဝင်မြို့ မျိုး မိုးထက်မြင့် ကောင်လေးငယ် အောင်ခိုင်မိုး နိုးအိမ်ရှင် အိုင်တီခရီးသည် ကော့သောင်းသား ခေတ်ပညာ ညီရဲ လင်းထက် မောင်ပညာ ဘသားချော
ဗွီဒီယို freemyanmarvcd burmeseclassic shweo မြန်မာ-နိုင်ငံခြား ရွှေအိပ်မက် ကိုရီးယား နိုင်ငံခြား နိုင်ငံခြား
ဘာသာရေး သီတဂူ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ ဖြူးဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒဓိက ရဝေနွယ်-အင်းမ ဓမ္မစေတီဖောင်ဒေးရှင်း အရှင်သာသန
သတင်းဆိုက်များ Eleven ပေဖူးလွှာ Yangon Media Group မြန်မာတိုင်း(မ်) Voice လျှပ်တစ်ပြက် Popularmyanmar7Day News ကြေးမုံ ဈေးကွက် အင်တာနက် Myanmar Daily
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး
Sewa Bus Bandung Pariwisata Murah Jaya Trans Holiday
۩۞۩ စောနေသွေး ۩۞۩
ဘ၀မှာ အောင်မြင်နိုင်စေတဲ့ နည်းလမ်းများ…
Free For Friend
သာ​အေး သို့​ပေးစာ (အတိုအထွာ)
Aung Win Hein (Noble)
ရုပ်ရှင်များကိုစတင်တင်ပေးပါတော့မည် ကနောင်သားလေးမိတ်ဆွေဟောင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Objects and binary files( Объекты и двоичные файлы )
Sounds that can't hear and Thoughts that can't see
EximiousSoft.Logo.Designer.v2.58.Cracked & Portable...!
ဘုရားပေးတဲ့ဆု - မီးနို
3 D Desktop
“ ချစ်သူကဗျာ ”
Sunday, December 18
ဘောလုံးကို ခေါင်းဖြင့် တိုက်ခြင်း ဦးနှောက်ကို ဒဏ်ရာရစေနိုင်
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး အားကစားနည်းဖြစ်သည့် ဘောလုံးကစားခြင်းတွင် ဘောလုံးအား ဦးခေါင်းဖြင့်တိုက်သည်မှာ မဖြစ်မနေ ပါဝင် ရသည့် အရာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အမေရိကန်ပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံးလေ့လာ တွေ့ရှိချက်များအရ ဘောလုံးအား ဦးခေါင်းဖြင့်တိုက်ခြင်းသည် တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်စေကာမူ ဦးနှောက်အား ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အမေရိကန်ပညာရှင်များသည် နောက်ဆုံးပေါ် ဓာတ်မှန်ကိရိယာများ (MRI) ကို အသုံးပြုကာ အပျော်တမ်း ဘောလုံးသမား ၃၈ ဦးအား ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ယင်းတို့ ဘောလုံးကစားစဉ် ခေါင်းတိုက်မှု အရေအတွက်ကို တွက်ချက်ကာ လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဘောလုံးကစားစဉ် ခေါင်းတိုက်မှု အများအပြား ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကစားသမားများ၏ ဦးနှောက်တွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အဆိုပါဒဏ်ရာများသည် ဦးခေါင်းခွံ ထိခိုက်မှုကြောင့် ရရှိသော ဒဏ်ရာများနှင့် ဆင်တူကြောင်း သိရှိရသည်။ နူးယောက်မြို့ရှိ Albert Einstein တက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန၏ တွေ့ရှိချက်အရ ဘောလုံးအား တစ်နှစ်လျှင် အကြိမ် ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ အတွင်း ခေါင်း​ဖြင့် တိုက်ပါက ဦးနှောက်အား “ပြင်းထန်သော” ဒဏ်ရာများ ရရှိစေနိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဘောလုံးအား ခေါင်းဖြင့်တိုက်ခြင်းသည် ဦးနှောက်တွင်းရှိ နာဗ့်ကြောများကို ထိခိုက်စေနိုင်လောက်သည်အထိ မပြင်းထန်သော်လည်း အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ပြုလုပ်ပါက ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို ယိုယွင်းပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ သီးခြားစမ်းသပ်မှုများမှ တွေ့ရှိချက်များအရ ဘောလုံးအား ခေါင်းဖြင့်ကြိမ်ဖန်များစွာ တိုက်ခဲ့သူများသည် မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားနှင့် မျက်လုံး-လက် တူညီဆောင်ရွက်မှုများကို လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုများအရ ဘောလုံးကစားရာတွင် ဦးခေါင်းဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ တိုက်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်​စေနိုင်သလို မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားလည်း ကျဆင်းစေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြလျှက်ရှိသည်။
Posted by mhuthaw
ဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ် ၊ အကူအညီတောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော့် အကောင့်ကို မေးလ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ nothateme51@gmail.com
အာဇာနည်နေ့ သမိုင်းကြောင်း အစုံ
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို မျှဝေဖို့ ရှာနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ဘယ်သူမှလည်း မတင်ကြဘူး။ တင်တော့ တင်ကြပါတယ်။ သတင်းစာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ...
ဒီတစ်ခါ အဆိပ်ဖယ်ရှားပေးသောအသီးအနှံတစ်ချို့ကိုတင်ပြပေးလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်ပုံမှန်စားသုံးနေတဲ့ အသီးအနှံတွေပါပဲ။ မသိသေးသူ...
ဖုန်း အတု နဲ့ အစစ် ခွဲခြားဖို့အတွက်
ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် Androidလို့ ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ Touch Screenကို စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွဲပြားစွာသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ခက်တာက Androidကို အသုံ...
ဆံကေသာအတွက် အသုံးဝင်သော အစားအစာများ
၁။ ဒိန်ချဉ် ဒိန်ချဉ်တွင် ကြွယ်ဝသောဗီတာမင်များမှာ ပရိုတင်း၊ ကယ်စီယမ်၊ Vitamin B ၊ Mineral သတ္တုများ၊ ထိုအရာများမှ ဆံပင်သားအတွက် လိုအပ...
Windows 8 တွင် zawgyi font အသုံးပြုနည်း
ဒီတစ်ခါတော့ Windows 8 အသုံးပြုသူများအတွက် zawgyi-one font အသုံးပြုနည်းလေး ပြောပြပါ့မယ်။ အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ လင့်လေးတွေကနေ zawgyi f...
Message free ပို့မယ်
ဒီတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောပြလို့ ပြန်ပြီး ရှယ်ယာ ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Message free လို့ရတဲ့ ဆိုက်လေး တစ်ခုကို ညွှန်ပြချင်ပါတယ်။ တကယ...
ကဲဒီနေ့တော့ စိုးသူ ပဟေဠိလေး နည်းနည်းမေးမယ် နော်။ အပျော်ပေါ့။ အဖြေကတော့ နောက်နေ့မှ ပြောပြမယ်။ မများဘူး ။ ဆယ်ခုထဲပဲ ။ Fan page တစ်ခုကနေ ...
ငါတို့မတွေ့တော့ဘူးကွာ ( သီချင်း )
ဒီနေ့တော့ သီချင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခံစားနားဆင်ကြည့်ပါ ။ အားလုံးကိုလေးစားလျက်....
ခဲတံ တစ်ချောင်းတည်းနှင့် ဆွဲထားသော အံ့မခန်း ပန်းချီကား ခဲတံ တစ်ချောင်းတည်းနဲ့ ယခု မြင်နေရတဲ့ ကြောင်ပုံကို Paul Lung အမည်ရ ပန်းခ...
C box မှာ အစ်မတစ်ယောက် ပြောလာလို့ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ စာအုပ်ကတော့ စာရေးဆရာ အောင်လင်း ရေးသားပါတယ်။ေ...
My Music City
ဂျာနယ်များဖတ်ရှုရန်အင်တာနက်ဂျာနယ်7daynews ဂျာနယ်weeklyeleven ဂျာနယ်ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်အလင်းတန်းဂျာနယ်MyanmarTimeဂျာနယ်အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်ဧရာဝတီဂျာနယ်ရွှေအမြူတေဂျာနယ်မြန်မာဘောလုံးEleven ဂျာနယ်Flower News ဂျာနယ်
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်ဗုဒ္ဓ ဓမ္မရသမြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်းဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုခြင်းဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားများဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ လောကအသင်းကြီးဓမ္မလက်ဆောင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မရနံဓမ္မရိပ်ဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ဓမ္မဌာနေဓမ္မဟေဝန်ဓမ္မစကားဓမ္မမေတ္တာဓမ္မကုန်းမြေဓမ္မဥယျာဉ်ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မဟာလယ်တီ ဒီပနီကျမ်းစာဓမ္မဒူတ လူငယ်များအသင်းဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)အရှင်ကုမာရအရှင်ဝိစိတ္တ (Korea)မြတ်ရောင်နီအရှင်လောကနာထအရှင်နန္ဒသာရ(သစ္စာရောင်ခြည်)အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်)အရှင်ကောဝိဒ၏ပညာဒါနအရှင်ဦးဥတ္တမသာရအရှင်ကုသလသာမိ (ပျော်ဘွယ်)အရှင်ဉာဏဒီပ (ဓမ္မရတနာ)အရှင်သာဓိန(အလင်းသစ်)အရှင်ခေမိန္ဒ (မော်ကွန်းသစ်)အရှင်ဝိစိတ္တသာရ(ဓမ္မဂင်္ဂါ )အရှင်ဓမ္မသာမိ(အင်္လကာ)ရဝေနွယ်(အင်းမ)သာမဏေကျော်စာသင်တိုက်တရားတော်သုခကာမီဥပသကာဝိမုတ္တိရသစန္ဒာသူရိယမြတ်ပန်းရဂုံ (ဓမ္မသာကစ္ဆာသဘင်)သစ္စာတရားများစုဝေးရာယောအသင်းစစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းဝါတွင်းအင်္ဂါပတ် ဆွမ်းလောင်းမြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်းထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းပညာရံသီဝိဟာရစိတ္တသုခဘုန်းကြီးကျောင်းဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီဗုဒ္ဓဓမ္မရံသီ(ဖန်လန်)ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်းဓမ္မရောင်ခြည်ကျောင်းညောင်ကန်အေး(ဂျိုဟိုး)သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်းသီတဂူသတင်းသီတဂူစတားမိုးကုတ် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ်ပတ္တမြားရိပ်သာ (မိုးကုတ်)မဟာစည် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ်ညောင်ကန်အေး(မဟာစည်)ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ(မဟာစည်)အေးရိပ်ချောင်(မဟာစည်)သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာကန္နီသမထဝိပဿနာမြေဇင်း ဝိပဿနာကသစ်ဝိုင် ဝိပဿနာထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကလေးဝ တောရလောကချမ်းသာအနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာအဖြူရောင်မေတ္တာသစ္စာအလင်းသုခရိပ်ချယ်ရီမြို့တော်နေခြည်သွေးသစ်သရုပ်ပြ အဘိဓာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရွှေတိဂုံပါရမီဖြည့်မပြီးဆုံးသောနေ့ရက်များတရား၌မွေ့လျော်ခြင်းပျော်ဘွယ်ဆရာတော်ငြိမ်းချမ်းစွာရွက်ဝါမနက်ဖြန်ရည်ရွယ်ရာမင်္ဂလာသတင်းစဉ်အေးငြိမ်းပျော်ရွှင်စေတနာသုခဇီဝိတသံဃာ့ဆေးရုံကြီးဇမ္ဗူသီရိမြတ်ရတနာဓမ္မဒါနဓမ္မရံသီစာမျက်နှာဓမ္မရသနိဗ္ဗာနနိဗ္ဗာနဓမ္မမိုးကုတ်(လန်ဒန်)မြန်မာ့ရတနာအရှင်လောကနာထအောင်မြေပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်အနတ္တလက္ခဏသုတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာBuddhaNetDhamma DownloadDhamma WebDhammaWebBooksDhammaDownloadDhamma EnglishBuddha NetE-DhammaGolden WordsOne Dollar FundThe Best Friendပညာပါရမီ
စာကြည့်တိုက်မြန်မာအီးဘွခ်မြန်မာရခိုင်များရွှေစကားနေ့သစ်စာအုပ်စင်အဖြူရောင်မေတ္တာအံဘုန်းမြတ်စာအုပ်စင်အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင်ဝိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင်ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်စာအုပ်စင်ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ်စာပေရိပ်စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက်ချယ်ရီမြို့တော်စာအုပ်စင်Myanmar Ebook ArchiveMyanmar EbookGolden MyanmarDhamma Web BooksDhamma Download MyanmarDhamma Download EnglishBurmese ClassicBuddha NetBook Hive
ရင်ထဲကလာသောကလောင်ရှင်များဇေယျာလင်းအမရာဆရာအောင်သင်းအိမ့်ချမ်းမြေ့ဆရာမကြည်အေးလွန်းထားထား (ဆေးတက္ကသိုလ်)မိုဃ်းဝေးခရမ်းပြာထက်လူသစ္စာနီညလင်းဖြူဆရာအတ္တကျော်ဆုကဗျာမွန်းသက်ပန်(ဆေး-၁)သူရဿဝါပန်ဒိုရာမယ်ကိုးနိုင်းနိုင်းစနေချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)မြသွေးနီ
နည်းပညာဆိုဒ်များစေတန်ဂေါ့အောင်လေး (နည်းပညာ)သံလုံငယ်ညီလင်းဆက်ညီနေမင်းစံပီးမောင်ပညာမောင်စေတနာကိုThinkerကိုရန်အောင်ကိုမင်းကျော်ကိုကျော်စွာငြိမ်းကိုဇော်357ကို‌ဇော်(ဒဂုံ)ကိုချစ်ဦးကိုကျော်ကျော်ဦးစပ်မိစပ်ရာစိုင်းနက္ခတ်ဖိုးသားတူလေးပုဂံသားမောင်ဘကျော်ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာမုန်တိုင်းရာမညဖိုးလပြည့်အလင်းရောင်အညာသားဟိုက်ဝေးအိုင်တီခရီးသည်အိုင်တီမန်းနည်းပညာမှတ်တမ်းမာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများမနောသားမနောဖြူလေးမိုးမြင့်ရှိန်းမိုးထက်မြင့်လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ်မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာမလေးရှားရောက်မြန်မာဟင်းလင်းပြင်ကျနော့မှတ်စုစာအုပ်ကနက်သီရီသားလေးညီညီ(လောကမီးအိမ်)ဧရာညီနောင်အီလက်ထရောနစ်ဘုရင့်နောင်ဝိုင်းBurma IT ShareCo2'sNoteSTAMEDIAOgreKP3 FamilyKogee LayWWMMMBloggerHelpdeskMyanmar DownloadMyanmarITMenMy SoftwaresThememagicMonGTCTroj4nEngineer4Myanmar
လေ့လာစရာဆိုဒ်များMyanmardailyအဝါရောင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန်Exam CollectionMyanmar telt:Dictionary
ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းဆိုဒ်များအင်တာနက်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်First Elevenမြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ်မြန်မာတိုင်း(မ်)ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်People OnlineSoccerMyanmarဂီတဆိုင်ရာဆိုဒ်များFlashbandBurmeseclassicရွှေအိပ်မက်သနပ်ခါးညကဗျာ
ကွန်ပျူတာနှင့်ဆိုင်ရာSimple HelpPC HelpComputer TechnologyEducation soffwareESPOkino GraphicsDictionary&ThesaurusLearning PageShare MeFilehippoPhoto Editor
နည်းပညာလမ်းညွှန်MMSOMYSTERY ZILLIONExam CollectionCAD for MynKPZhttp://chan09.blogspot.com/ချန်းချန်းCreativeLayerရိုးရာMyanmarLensmanနဂါးမြန်မာဖိုတိုရှော့မျိုးဇော်လင်းPHPMyanmarZack NotesICT ReadersKnowledgeBridge
ပြည်တွင်းသတင်းလမ်းညွှန်စွယ်စုံရိုးရာလေးMMDailynewsပုသိမ်မြို့တော်မြန်မာစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းThe VOICEခေတ်လူငယ်All Channelရန်ကုန်မီဒီယာမြန်မာပို့စ်လမ်းသစ်ဂျာနယ်
မန္တလေး၊စီးပွားရေးလမ်းညွှန်GoldenCityမန္တလေးသတင်းMyanmarExpoနောင်မွန်းTrade ExchangeMyanmarBizPortalInvest MyanmarOMyanmarဈေးကွက်ဂျာနယ်EstatemmeTradeMyanmar
အားကစားနှင့်မိုးလေဝသရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကမ္ဘောဇအက်ဖ်စီဇေယျာအက်ဖ်စီဒယ်လ်တာယူနိုက်တက်မကွေးရတနာပုံမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ခြင်းလုံးထွန်းလွင်MMWEATHERမိုးလေဝသ၊ဇလဗေဒဦးစီးမှုဌာနတယ်လီဖုန်းဒစ်ရှင်နရီရန်ကုန်ဒစ်ရှင်နရီYellow Map Pageမြန်မာစားတော်ဆက်
Copyright (c) 2011 အိမ့်မှူးသော်. Designed by mhuthaw
PlayStation Vita Games, Home Improvement, r4 card